Duqeyn Lagu dilay Xubno Katirsan Ururka Al-Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Duqeyn Lagu dilay Xubno Katirsan Ururka Al-Shabaab
Ardaan Yare 7 January 2020
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo dhanka cirka ah oo xalay saqdii dhexe diyaarado dagaal ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobollada Jubbooyinka.
Duqeymaha oo ahaa kuwa xoogan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahannada Al-Shabaab oo ku xoogan gobolladaasi.
Wararka ayaa sheegaya in duqeymahaasi ay si gaar ah uga dhaceen degmooyinka Jilib, Jamaame iyo deegaanka Cagalibaax, islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in weeraradaasi dhanka cirka ah lagu khaarijiyey dagaalyahanno iyo saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab, inkastoo aysan shaacin tirada saxda ah ee lagu dilay halkaasi.
Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in nolosha lagu qabtay 4 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka baxay Al-Shabaab oo ku aadan duqeymahaasi, balse xaaladda ayaa saaka dagan.
Maalmihii dambe ayaa waxaa sii kordhayey dhaq dhaqaaqyada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda koonfurta Soomaaliya.
Si kastaba weerarkaan dhanka cirka ah ayaa ku soo aadaya, iyadoo maalin ka hor dagaalyahannada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaalla gobolka Lamu, kaas oo ay si wadajir ah uga howlgalayeen ciidamo Mareykan ah iyo kuwa dowladda Kenya.
Somalia oo ka mid noqotay Isbaheysi cusub oo 8 dal ay ku Midoobeen
Madaxweyne Xaaf oo dowladda ka dalbaday in la siiyo 20 Xildhibaan